Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Maxkamadeynta John Terry Iyo Anton Ferdinand. - jornalizem
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Maxkamadeynta John Terry Iyo Anton Ferdinand.
Ciyaaryahan Anton Ferdinand ayaa meesha ka saaray in aflagaadadii ka soo gaartay John Terry inaysan aheyd mid kajan ama kaftan aheyd, waxaana uu sheegay inuusan maqlin aflagadadaas markii uu garoonka ku jiray, sida lagaay dhageysatay maxkamada.
Daafaca xulka England iyo Chelsea John Terry oo 31 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu ugu yeeray Ferdinand “f****** black c***” intii ay socotay ciyaar Premier League ah 23kii October sannadkii hore.
Maxkamada Westminster Magistrates ayaa dhageysatay in daafaca QPR inuusan markii hore u maleyneynin in aflagaado cunsurinimo ay ku dheehan tahay la adeegsaday.
Waxa uu gacan qaaday markaas Terry, isagoo aqbalay inay aheyd isku dhac caadi ah oo ay isku dhaceen labo ciyaaryahan.
Lakiin ciyaarta ka dib, saaxiibtiis ayaa tustay muuqaal la soo dhigay YouTube, waxaana uu aaminay in Terry uu isticmaalay hadalo cunsuriyad ay ku dheehan tahay.
Ferdinand ayaa u sheegay maxkamada in hadii uu ogaan lahaa waqtigaas inuu u sheegi lahaa garsoorayaasha.
Waxa uu yiri: “Aad ayay ii dhaawici laheyd, lakiin wax jawaab ah kama bixin laheyn markaas, madaama aan ahay xirfadle sidaas kuma dhaqmi kari. Waxaan u sheegi lahaa garsoorayaasha waxa dhacay, waxaana arinta geli lahaa ciyaarta ka dib”.
“Marka qof uu meesha keeno midabkaaga, waxa ay u qaadeysaa arinta heer kale, waana wax aad ii dhaawacaya”.
Chelsea ayaa sagaal ciyaaryahan aheyd markii isku dhaca uu ka dhacayay Loftus Road, Ferdinand iyo Terry ayaana bilaabay inay aflagaado isweydaarsadaan iyagoo ku doodayay rigoore, sida ay maxkamada dhageysatay.
Terry ayaa eedeymaha loo heysto beeniyay, waxaana uu sheegay inuu si kajan ah ugu jawaab celinayay Ferdinand markii uu ereyadaas isticmaalayay.
Maxkamada ayaa dib u bilaabaneysa maanta, waxaana la filayaa inay socon doonta seddexda maalmood ama afarta maalmood ee soo socota.
Hadii Terry lagu helo dacwada lagu heysto waxa ugu badan ee uu muteysan karo waa in lagu ganaaxo 2500 ginni, lakiin mustaqbalkiisa ciyaareed ayaa halis geli doona.